November 2011 | Pyithu Hluttaw - ပြည်သူ့လွှတ်တော်
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ဗြိတိသျှပါလီမန်အမတ်အစိုရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဗြိတိသျှပါလီမန်အမတ်အစိုရအဖွဲ့ဝင် ၀န်ကြီးနှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန၀န်ကြီး H.E. Mr. Andrew John Bower Mitchell ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ သည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအား တရုတ်နိုင်ငံအမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်၊ ပြည်ထဲရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာ ကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်၊ ပြည်ထဲရေးရာနှင့် ဥပဒေ ရေးရာကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌ H.E. Mr. Bai Jingfu ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။ ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် တရုတ်-မြန်မာလွှတ်တော်များ၏ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု တိုးမြှင့်ရေး၊ လွှတ်တော်အနေဖြင့် တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် တရုတ်အမျိုးသားပြည်သူ့ကွန်ဂရက်အနေဖြင့် ဥပဒေကြမ်းများ ရေးဆွဲတင်သွင်းနေမှုတို့
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီနှင့်ပေါလစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်၊ ပေကျင်းမြူနီစီပယ် ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး ဦးဆောင်သည့် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ နှင့်ပေါလစ်ဗျူရို အဖွဲ့ဝင်၊ ပေကျင်းမြူနီစီပယ်ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး H.E. Mr. Liu Qi ဦးဆောင်သည့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်လွှတ်တော် အဆောက်အအုံရှိ ဇမ္ဗူသီရိဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ဂျာမနီနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးဆောင်သောချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ ဂျာမနီနိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ၀န်ကြီး ဒေါက်တာ ၀မ်နာဟိုယာ ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များအား ယနေ့နံနက် ၉ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား နော်ဝေးနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှု ၀န်ကြီး လာရောက်တွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းအား နော်ဝေးနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုဝန်ကြီး H.E. Mr. Erik Solheim နှင့်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။